Kedu 3D Nbipụta Teknụzụ Ga-agbanwe Ọdịnihu Anyị | Martech Zone
Kedu ụdị mgbanaka ị na-eyi? Ihe mgbanaka diamond dị 1/2 ga-adị oke karịa na mkpịsị aka gị? Ọfọn, ọ bụrụ na ịnwee mbipụta 3D dị nso, Brilliance na-enye gị ohere bipụta mgbanaka ntinye aka na otutu nha ugbu a ma gbalịa ha n'ụlọ iji hụ maka onwe gị. Enweghị mkpa ịhapụ ụlọ gị wee gafee nzukọ ahịa dị elu na onye na-ere ahịa mpaghara, ugbu a ị nwere ike ịzụ ahịa maka ọnụahịa kacha mma na ngwaahịa kachasị mma n'ịntanetị ma nwee obi ike na ọ ga-adaba ma maa mma na nwanyị ị ga-alụ!
Nke a bụ naanị otu ihe atụ nke ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke ga-agbanwe otu anyị si azụ ahịa site na nkasi obi nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ anyị.
Coca-Cola gbara a Obere M mkpọsa nke mere ka ndị na-ebipụta bipụta mbipụta 3D nke ha.
eBay Kpọmkwem na-enye ndị ọrụ ohere ibudata ngwa gọọmentị ma mepụta ngwa ahịa na ngwa ndị ahaziri iche.
Dita Von Teese depụtara a 3D-ebipụta Uwe, mmekota n'etiti mmebe Michael Schmidt na onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Francis Bitonti.
Volkswagen gbara ndị Fans ume ka ha gbaa hazie Polo ha site na weebụsaịtị ha.
BelVita nri ụtụtụ Biscuits mara ọkwa a ọhụrụ zoo na 3D biri ebi trophies n'etiti onyinye.
Maka saịtị azụmahịa n'ịntanetị, ohere ndị ahụ adịghị agwụ agwụ na nkeonwe na ịkọ ụzọ. Enweghị ihe ọ bụla dị ngwa karịa ịgbanye mmekọrịta n'etiti otu ndị na-ahụ maka ịntanetị, ma ọ bụ ibipụta akụkụ omenala maka ụgbọ ala gị na nkeji ole na ole. Sdị nwere ike itinye ndị ahịa aka miri emi site n'inye ha ngwaahịa nkeonwe ka ha bipụta n'ụlọ.
Ihe omuma ihe omuma a site na Brilliance na-ejegharị site na ụzọ 8 nke mbipụta 3D ga-agbanwe ndụ anyị, site na otu anyị si azụ ahịa, rie nri, kuziere, ụgbọala, zụta ụlọ, kpuchido gburugburu ebe obibi, nweta nlekọta ahụike, wee zụlite ụzọ ndị ọzọ anyị ga-esi na-ahazi ndụ anyị.
Tags: Ntinye 3dbelvitamgbukepụcoca-colaebay kpomkwemfashionmini mPoloVolkswagen
Nkọwapụta Onwe Onye: Otu esi ede ihe banyere m